Mônôteisma : Fahasamihafan'ny versiona roa - Wikipedia
Mônôteisma : Fahasamihafan'ny versiona roa
Endrik'io pejy io tamin'ny 5 Aprily 2019 à 09:37
145 octets ajoutés , il y a 2 ans
Rohy sy tsipelina
Endrik'io pejy io tamin'ny 31 Desambra 2018 à 11:04 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 5 Aprily 2019 à 09:37 (hanova) (esory)
k (Rohy sy tsipelina)
Ny '''monoteisma''' dia finoana [[Andriamanitra (anarana iombonana)|andriamanitra]] tokana na finoana ny maha tokana an' [[Andriamanitra (tokana)|Andriamanitra]]. Ny [[politeisma]], izay finoana andriamanitra maro, no tena mazava ny fifanoherany aminy. Telo ny fivavahana fantatra mazava fa monoteista, dia ny [[jodaisma]] sy ny [[kristianisma]] ary ny [[silamo]]. Ny monoteisma dia angamba nambokananomboka tany amin'ny taonjato faha-14 tal. J.K., niaraka amin'ny nanombohan'ny [[Faraona|faraôna]] Amenofisy IV nivavaka tamin'i Atona, andriamanitra masoandro, izay ninoana fa fara tampony sady tokana. Ny [[zoroastrisma]] dia fivavahana tany Persia izay azo lazaina koa ho monoteisma. Nefa ny fotoana fantatra mazava nipoiran'ny monoteisma dia tamin'ny fandraisan'ireo [[Hebreo (mponina)|Hebreo]] ny fivavahana amin'Andriamanitra, dia ilay andriamanitra tokana, indrindra tamin'ny fivoahan'izy ireo avy tao Ejipta.
=== Monoteisma tao amin'ny jodaisma ===
Ilay andriamanitra tokana ao amin'ny [[Tanakh|Baiboly hebreo]] dia matetika tononina amin'ny anarana hoe ''El''. Io no anaran'ny andriamanitra fara-tampon'ny mponina tao [[Kanaana|Kanana]] izay noraisin'ny [[Hebreo (mponina)|Hebreo]] koa ho anaran'ny andriamaniny rehefa tonga tao Kanana izy ireo.
Ny mpikaroka momba ny fivavahana dia milaza fa tsy tonga dia monoteista ny fivavahan'ny hebreo fa [[henoteisma]] izay nomena anarana hoe ''[[yahvisma|iahvisma]]'' satria ninoan'ny Hebreo taloha ny fisian'andriamanitra maro nefa i [[Iahveh]] no nanataony ho andriamaniny nolovany tamin'ny razany, satria samy nanana ny andriamaniny ny firenena tsirairay. Tany am-pahababoana any [[Babilona]] vao nanomboka ny finoan'ny [[Jiosy]] ny maha andriamanitry ny firenena rehetra sy izao rehetra izao an'Andriamanitra.
Monoteista ny [[Kristianisma|Kristiana]] nefa misy fahasamihafana amin'ny finoan'ny Jiosy sy ny Silamo ny finoany an'Andriamanitra. Ny maro amin'ny Kristiana dia mino fa "Telo Izay Iray" na [[Trinite]] Andriamanitra, izany ataony hoe "andriamanitraAndriamanitra tokana manana persona telo". Ny hoe ''persona'' dia tsy nadikan'ny teolojiana miteny malagasy fa nionona amin'ny fitzonana ny teny latina hoe ''persona'' na fanagasiana ny teny frantsay hoe ''personne'' na ny teny anglisy hoe ''person'' izy ireo. Ny teolojiana katolika mampiasa ny fiteny malagasy dia mandika ny teny latina hoe ''persona'' amin'ny teny malagasy hoe ''olona''.
Tsy mifanaraka amin'ny monoteisma ny fampianarana ny Trinite hoy ny antokom-pivavahana kristiana sasany isan'ireo niforona taorian'ny [[Reformasiona]] (na [[Reforma]]). manohana ny atao hoe [[onitarisma]] izy ireo, izany hoe tsy persona telo Andriamanitra fa tokana. I Fausto Socin dia namorona ny fiangonana manohitra ny Trinite tao Eoropa Atsinanana atao hoe "Rahalahy Poloney". Niitatra tamin'ny taonjato faha-19 tany amin'ireo firenene anglo-saksona sy tany Amerika Latina ny onitarisma. Maro koa ireo fivavahana kristiana njiforonaniforona taty aoriana izay manohitra ny Trinite, ka isan'ireny ny [[Vavolombelon'i Jehovah|Vavolombelon’i Jehovah]].
Ny [[zoroastrisma]] na zoroastrianisma dia fivavahana naorin'i [[Zaratostra]] (na Zoroastra) tany [[Persia]] tany amin'ny taonjato faha-7 tal. J.K. Manindry mafy ny fifanoheran'ny herin'ny tsara amin'ny herin'ny ratsy ([[Doalisma (finoana)|doalisma]]) i Zaratostra nefa ny fivavahany dia azo lazaina hoe monoteista satria tsy mitory fisian'andriamanitra roa mifanohitra izy fa andriamanitra tokana. I [[Ahura Mazda]] (na Ohrmazd) no anaran'ny andriamanitry ny zorostrisma. Ireo andriamanitra maro tao amin'ny fivavahana [[mazdeisma]] teo alohany dia lasa zavatra hafa heverina indraindray ho sahala amin'ny [[anjely]] na fiseho manokan'i Ahura Mazda izay lasa nanana tena manokana ka atao hoe ''[[amesha spenta]]''. Ny mpikaroka momba ny fivavahana dia milaza fa avy amin'ny finoana ny fisian'ny ''amesha spenta'' no nipoiran'ny finoana ny [[anjely]] sy [[arikanjely]] tao amin'ny fivavahana hafa.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/969817"